Tag: njikọ | Martech Zone
Kedu ka foto profaịlụ LinkedIn dịruru mkpa?
Ọtụtụ afọ gara aga, agara m ogbako mba ụwa na ha nwere ọdụ ụgbọ ala akpaghị aka ebe ị nwere ike ịse foto ma nweta isi okwu ole na ole. Nsonaazụ ya mara mma… ọgụgụ isi dị n'azụ igwefoto mere ka etinye isi gị na ebumnuche, wee gbanwee ọkụ ahụ na-akpaghị aka, wee nwee ọganihu… na-ese foto. Ọ dị m ka a dang supermodel ha pụtara nke ọma… na m ozugbo bulite ha na profaịlụ ọ bụla. Ma ọ bụghị m n'ezie.
Salesflare: CRM maka obere azụmaahịa na ndị otu na-ere ahịa na-ere B2B
Na Mọnde, Nọmba 16, 2021 Na Mọnde, Nọmba 16, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị gwala onye isi ahịa ọ bụla okwu, mmejuputa usoro njikwa mmekọrịta ndị ahịa (CRM) bụ ihe dị mkpa… yana ọ na-abụkarị isi ọwụwa. Uru nke CRM dị elu karịa itinye ego na ihe ịma aka, n'agbanyeghị, mgbe ngwaahịa ahụ dị mfe iji (ma ọ bụ ahaziri ya na usoro gị) na ndị otu gị na-ere ahịa na-ahụ uru na ịnakwere na leverage teknụzụ. Dị ka ọtụtụ ngwá ọrụ ire ere, e nwere nnukwu ọdịiche dị na njirimara ndị dị mkpa maka a
Ọ bụrụ na ị bụ ika, ikike ịhazi mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta gị n'otu ụzọ njikwa mgbasa ozi mmekọrịta dị oke mkpa iji chekwaa oge na itinye atụmatụ gị. Akụkụ na uru gụnyere: Njikwa akaụntụ ọtụtụ - Onye njikwa akaụntụ ọtụtụ Circleboom na-eme ka ọ dị mfe ijikwa akaụntụ Twitter, Facebook, LinkedIn, Google My Business, Instagram na Pinterest akaụntụ site na otu ikpo okwu kwalite posts gị - njikọ aka mgbasa ozi mgbasa ozi na-ejikọta ya ozugbo. na kensinammuo ọdịnaya imewe, na
Ụlọ ọrụ m anọwo na -enyere ndị ahịa ole na ole aka na mmejuputa na ịgbasa mbọ ahịa ahịa Shopify n'ime afọ ole na ole gara aga. N'ihi na Shopify nwere nnukwu ahịa ahịa dị na ụlọ ọrụ e-commerce, ị ga-achọpụta na enwere ọtụtụ ngwakọta arụpụtara nke na-eme ka ndụ dịrị ndị ahịa mfe. Ahịa azụmahịa na -elekọta mmadụ US ga -eto karịa 35% iji karịa ijeri $ 36 na 2021. Ọgụgụ isi Insider uto nke azụmahịa mmekọrịta bụ ngwakọta nke agbakwunyere
Mweghachi: Vidiyo na-enuba n'ihu ihe karịrị 30+ Social Media Platform n'otu oge
Restream bụ ọrụ na -enye ọtụtụ mgbasa ozi na -enye gị ohere ịgbasa ọdịnaya gị na ihe karịrị usoro nkwanye 30 n'otu oge. Restream na -enyere ndị na -ere ahịa aka ịgbasa site na ikpo okwu ụlọ nke ha, jiri OBS, vMix, e tc., Gụgharịa faịlụ vidiyo, hazie ihe omume, ma ọ bụ ọbụna dekọọ na ikpo okwu ha. Ihe karịrị nde vidio vidiyo 4 n'ụwa niile na -eji Restream. Nyiwe ebe njedebe gụnyere Facebook Live, Twitch, YouTube, Periscope site Twitter, Linkedin, VK Live, DLive, Dailymotion, Trovo, Mixcloud, kakaoTV,